[Review] Top 6 máy giặt cửa ngang tốt nhất nên mua hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 6 máy giặt cửa ngang tốt nhất nên mua hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 máy giặt cửa ngang tốt nhất nên mua hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Umshini wokuwasha Kulezi zinsuku, sekuyinto esetshenziswayo yasendlini ebalulekile kuwo wonke umndeni. Ngokuthuthuka kobuchwepheshe, imishini yokuwasha eminingi iye yazalwa inezici ezikhulayo. Lapho, umshini wokuwasha olayisha ngaphambili uthandwa abantu abaningi. Ngokuhambisana nesihloko esilandelayo, funda imishini yokuwasha engumthwalo wangaphambili eyi-6 ephezulu ongayithenga namuhla.
1 Ukuhlola okuhle nokubi kwemishini yokuwasha evundlile
1.1 Izinzuzo zemishini yokuwasha yokulayisha ngaphambili
1.2 Ukungalungi kwemishini yokuwasha yokulayisha ngaphambili
2 Imishini yokuwasha evundlile engu-6 ephezulu ethenjwa abantu abaningi
2.1 2.1 LG Inverter FC1475N5W2 . umshini wokuwasha ovundlile
2.2 2.2 Umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili we-Samsung WW75j42G0KW/SV
2.3 2.3 LG FC1408S4W2 umshini wokuwasha
2.4 2.4 Umshini wokuwasha ovundlile we-Panasonic NA-V90FX1LVT
2.5 2.5 Electrolux umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili EWF10844
2.6 2.6 Umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili we-Toshiba TW-BH95S2V
3 Ungawusebenzisa kanjani umshini wokuwasha olayishwa ngaphambili ngokuphepha?
Ukuhlola okuhle nokubi kwemishini yokuwasha evundlile
Umshini wokuwasha olayisha ngaphambili kuhle umshini wokuwasha olayisha ngaphambili umkhiqizo osanda kuklanywa onomnyango wokuwasha ophambi komzimba womshini. Njengamanje, lo mshini uthola ukunakwa kwabathengi ngenxa yezinzuzo zawo eziningi ezivelele.
Izinzuzo zemishini yokuwasha yokulayisha ngaphambili
Umshini wokuwasha olayisha ngaphambili Inomklamo owubukhazikhazi futhi wesimanje ofana nanoma iyiphi indawo yangaphakathi. Umkhiqizo wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, injini iqinile futhi ihlala isikhathi eside, ngakho-ke inokuphila kwenkonzo ende futhi ende. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yamanje yomshini wokuwasha olayisha ngaphambili ifakwe ubuchwepheshe obuphambili be-inverter. Ngakho-ke, ukunciphisa ukungqubuzana lapho usebenza kusiza injini ukuthi isebenze kahle futhi yonge amandla aphezulu.
Ngenxa yesakhiwo sokujikeleza kwe-centrifugal esivundlile, izingubo ziguqulwa ngokulinganayo, zisize ukuhlanza izingubo ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, ngedizayini yesigubhu evundlile, yonga amanzi amaningi uma iwashwa, kusetshenziswa amanzi angu-⅓ kuphela uma kuqhathaniswa nokujwayelekile.
Umshini wokuwasha olayisha ngaphambili usiza izingubo ukuthi ziwashwe zibe zihlanzekile futhi zome ngokushesha
Isivinini sokujikeleza salo mshini wokuwasha sifinyelela ku-1,400 rpm, ngakho ikhono lokukhama amanzi liphakeme kunezingubo ezomisiwe ngokushesha okukhulu. Ukwengeza, imishini yokuwasha yokulayisha ngaphambili ivame ukuhlanganiswa nezinhlelo eziningi zokusebenza, isiza i-washer ukuthi ikhethe imodi yokugeza efanelekile ngesimo sezingubo. Ngesikhathi esifanayo, iphinde inikeze ukuvikeleka okungcono kwezingubo, ukunciphisa ukusonteka noma ukuklebhula lapho ugeza.
Ukungalungi kwemishini yokuwasha yokulayisha ngaphambili
Ngaphandle kwezinzuzo ezivelele, umshini wokuwasha olayishwa ngaphambili usenemikhawulo emincane, okuyisidingo sesikhala esikhulu. Ngenxa yokuthi zenzelwe ukuba zikhudlwana kanye nokuvuleka okujikelezayo, zidinga indawo enkulu yokusebenza.
Omunye umkhawulo wukuthi awukwazi ukwengeza izingubo kanye nemithwalo yokuhlanza izingubo, ngenxa yomklamo we-cage ovundlile, lapho usebenza umnyango kufanele uvalwe ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, izindleko zokulayisha iminyango yomshini wokuwasha ngaphambili nazo ziphakeme kunalezo zemishini yokuwasha yokulayisha eqondile.
Ungase ube nesithakazelo: Imishini yokuwasha engu-5 ethandwa kakhulu ehlala isikhathi eside namuhla
Imishini yokuwasha evundlile engu-6 ephezulu ethenjwa abantu abaningi
Umshini wokuwasha olayisha ngaphambili Ngezici eziningi zesimanje zokusiza ukuhlanza izingubo kangcono, ukonga ukusetshenziswa kwamandla, kuthenjwa abathengi abaningi namuhla. Ake sibheke Imishini yokuwasha yangaphambili engu-6 ethengwa kakhulu Manje ukuze ukwazi ukukhetha umkhiqizo ofanele womndeni.
2.1 LG Inverter FC1475N5W2 . umshini wokuwasha ovundlile
Umshini wokuwasha olayisha ngaphambili we-LG FC1475N5W2 uklanywe ngokunethezeka, nevolumu yokuwasha engu-7.5kg. Umthamo omkhulu wokugeza womshini ngu-7.5kg, ofanele imindeni enamalungu angu-3-5.
Umkhiqizo uklanywe ngomnyango wesimanje ovundlile, ohlanganiswe nephaneli yokulawula ngesi-Vietnamese ngezindlela eziningi ezahlukene zokugeza. Ukusuka lapho, okwenza kube lula kubasebenzisi ukukhetha imodi efanele. I-LG FC1475N5W2 ihlanganiswe nezici eziningi zesimanje ezifana nemisebenzi ehlakaniphile ukusiza abasebenzisi baqaphe isimo sokusebenza somshini. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthola ngokushesha amaphutha ngesikhathi sokusetshenziswa ukuze uwalungise ngokushesha.
Umshini wokuwasha wokulayisha ovundlile we-LG FC1475N5W2 usebenzisa ubuchwepheshe be-Inverter ukuze wonge amandla. Ngesikhathi esifanayo, i-anti-vibration lapho umshini usebenza, isiza umshini ukuthi usebenze ngokushelela. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo usebenzisa ubuchwepheshe be-6-motion obukwazi ukulingisa ukusebenza kwesandla somuntu. Ukusuka lapho, ukusiza izingubo ukuba ziwashwe ngokuvelele futhi bazise indwangu ngayinye.
Intengo yesithenjwa: 8,300,000 VND.
Buka Okuningi: [Review] Ingabe umshini wokuwasha we-Toshiba muhle? Iluphi uhlobo okufanele ngiluthenge?
2.2 Umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili we-Samsung WW75j42G0KW/SV
I-WW75j42G0KW/SV iwumkhiqizo ophuma kumkhiqizo odumile we-Samsung. Le modeli yomshini wokuwasha izigubhu evundlile inombala omhlophe othambile ukuze ihambisane nazo zonke izikhala zangaphakathi ezihlukene. Umthamo wokuwasha womshini u-7.5 kg, ofanele imindeni enamalungu angu-4-5.
Umkhiqizo uhlanganiswe nobuchwepheshe be-Inverter ukusiza ukonga ukusetshenziswa kwamandla kahle, ukonga amanzi okugeza kuphela ½ uma kuqhathaniswa nomnyango omile. Ngesikhathi esifanayo, inikeza ukusebenza kahle, akukho msindo, kunobungane endaweni ephilayo.
Ikhono lokugeza lomkhiqizo livelele. I-WW75j42G0KW/SV inomklamo wesigubhu sensimbi esidala ukungqubuzana okuhle, engabulala amagciwane ngokufanele futhi indize iwasuse wonke amabala anenkani.
Intengo yesithenjwa: 6,990,000 VND.
2.3 LG FC1408S4W2 umshini wokuwasha
Umshini wokuwasha we-LG’s FC1408S4W2 unengaphandle lesimanje elinombala omhlophe omuhle oletha ubuhle besimanje besimanje endaweni evamile yendlu. Umthamo wokuwasha womshini ngu-8kg, uma umndeni wakho unamalungu angu-4-5, lokhu kuyisinqumo esihle.
Umkhiqizo unobuchwepheshe bokugeza isitimu be-Spa Steam obususa kufikela ku-99.9% wokungcola namagciwane ayingozi, izinto ezingezwani nengaphakathi kwendwangu. Ngaleyo ndlela, ukusiza ukuvikela impilo yamalungu omndeni ngendlela efanele.
Izindlela zokusebenza zomshini ziklanywe ngezinhlelo ezihlukahlukene ze-14 ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhethe imodi efanelekile yokuwasha yendwangu yezingubo zabo. Siza ukonga ugesi, ukonga amanzi, ukumelana kangcono nokudabuka, ukulwa nemibimbi.
Intengo yesithenjwa: 8,490,000 VND.
2.4 Umshini wokuwasha ovundlile we-Panasonic NA-V90FX1LVT
I-Panasonic Inverter 9Kg NA-V90FX1LVT evundlile yomshini wokuwasha ikheji inemigqa nama-engeli alinganayo futhi avumelanayo. Kuhlanganiswe nombala ompunga omuhle kunikeza indawo yakho yasekhaya ubuhle obuhle besimanje. Umthamo wokuwasha womshini ufika ku-9 kg, ofanele imindeni enamalungu angu-4-6 ongayisebenzisa.
Izici ezifanele zomshini njengomkhiqizo uklanywe ngesigubhu sedayimane esiyingqayizivele esinezimbobo zokudonsa amanzi amancane, okusiza ukudala ukungqubuzana okuhle. Ukusuka lapho, izingubo ziwashwa zihlanzeke, zisuse wonke amabala anenkani, futhi ngesikhathi esifanayo kusiza ukonga amanzi ngendlela efanele.Ubuchwepheshe be-Inverter busiza umkhiqizo wonge amandla aphezulu kanye nokusebenza kahle.
Intengo yesithenjwa: 15,990,000 VND.
2.5 Electrolux umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili EWF10844
Umkhiqizo olandelayo phezulu komshini wokuwasha izinwele ovundlile oshibhile ongcono kakhulu ongawuthenga namuhla umshini wokuwasha we-Electrolux EWF10844. Umthamo wokuwasha womshini ungama-8kg, okuyisinqumo esihle semindeni enamalungu angama-4-5.
Umkhiqizo uklanywe nge-HIVE yokuwasha amabristles anesimo sekhekheba lezinyosi ukusiza izingubo uma ziwashwa zingaklwejwa, ukuvikela okuphezulu kwendwangu ngayinye. Ngesikhathi esifanayo, lo mklamo uphinde usize umshini wokuwasha uhlanzeke kangcono, ukwazi ukususa zonke izinhlobo zamabala asheshayo.
Ngaphezu kwalokho, i-Electrolux EWF10844 nayo inesici sokuwasha ngesitimu, ngakho isiza wonke amagciwane, ukungcola, izinto ezingezwani nomzimba, nezingubo ukuthi zithambile ngemva kokugeza. Ngaleyo ndlela, esiza ukuvikela impilo yamalungu omndeni kangcono.
Ngaphezu kwalokho, ngobuchwepheshe be-Inverter, umkhiqizo uletha amandla okugcina ugesi namanzi phezulu. Umsebenzi wokugeza amanzi ashisayo aphephile usiza ukubulala amagciwane ngendlela engcono kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 10,990,000 VND.
2.6 Umshini wokuwasha umthwalo wangaphambili we-Toshiba TW-BH95S2V
I-Toshiba Inverter 8.5Kg TW-BH95S2V evundlile yomshini wokuwasha ikheji inomklamo wesimanje onombala omnyama okhangayo. Ngomthamo wokugeza ofika ku-8.5 kg ungakwazi ukugeza izingubo izinsuku noma amalungu omndeni ngokunethezeka. Ukusebenzisa i-inverter direct drive motor kunciphisa umsindo, kusiza umshini ukuthi usebenze ngokuzinzile futhi wonge ugesi namanzi ngendlela efanele.
Okukhethekile ngalo mshini ukuthi unemodi ye-smart spin eyomisa izingubo kahle futhi ngokushesha, ikunikeza isikhathi esengeziwe sokuphumula nokuphumula nsuku zonke. Ubuchwepheshe obusha besivinini sokujikeleza esingafika ku-1600 rpm, ukuze uthole isikhathi sokujikeleza esisheshayo, izingubo ezihlanzekile nezinuka kamnandi. Kanye nedizayini yesihlungi se-Nano Titanium, iyi-antibacterial kanye ne-anti-bacterial ukuvikela impilo yomndeni kangcono.
Ngokuqondile, umshini wokuwasha izigubhu we-Toshiba TW-BH95S2V ovundlile ufakwe nomsebenzi wokuqalisa kabusha, ngalo msebenzi umshini uzoqhubeka nokuzigeza ngemuva kokuhluleka kwamandla. Ngakho-ke ukuze wonge amandla engeziwe, akudingeki ukuthi uqale kabusha umshini kusukela ekuqaleni. Ubuchwepheshe be-inverter obuthuthukisiwe busiza umkhiqizo ukuthi wonge ugesi namanzi ngenkathi usanikeza umphumela wokuhlanza ongcono kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 7,900,000 VND.
Ungawusebenzisa kanjani umshini wokuwasha olayishwa ngaphambili ngokuphepha?
Kuya Sebenzisa umshini wokuwasha izigubhu ovundlile iphephile futhi ihlinzeka ngokusebenza kahle kokuhlanza, kanye nokonga ukusetshenziswa kwamandla. Lapho usebenzisa umshini, kufanele uqaphele amaphuzu alandelayo:
Umshini wokuwasha izigubhu ovundlile kufanele utshalwe uqine, ubekwe endaweni efanayo eyisicaba, ngamafidi amane phansi. Amanzi ngesikhathi sokugeza kumele ahlale anele ukuze umshini ungadlidlizi uma usebenza.
Beka umshini endaweni eyomile, hhayi endaweni enomswakama ngoba kulula ukuvuza ugesi.Kufanele uxhume indawo yokuphuma enezigaba ezi-3 noma, uwugaye ukuze uphephe, ukugwema ukuvuza kukagesi ngesikhathi sokusebenzisa.
Ngemuva kokusetshenziswa, kunconywa ukuhlanza ngaphakathi nangaphandle komshini, sula ukungcola okubanjwe ukuze unciphise ukukhula kwamagciwane kanye nokugcina umshini kangcono futhi uhlale isikhathi eside.
Ungawubeki umshini ezindaweni ezifana nekhishi ngoba umusi, amafutha, usawoti… unganamathela emshinini, wenze umshini ube manzi, ugqwale, ungahlanzeki, futhi unciphise ubudala bomkhiqizo.
Kufanele uhlanze isigubhu somshini wokuwasha ngezikhathi ezithile, ususe isondo lokuzulazula ukuze uhlanze amabala anamathela isikhathi eside. Kokubili kusiza ukuvikela impilo futhi kusize umshini usebenze kangcono.
Ukusetshenziswa isikhathi eside komshini wokuwasha izigubhu ovundlile kuzodala ukuthi umshini ushise kakhulu. Noma lapho umshini wenza imisindo engavamile phakathi nokusetshenziswa, kufanele uyeke ukusebenza futhi uhlole ngokushesha.
Ngenhla ngu Imishini engu-6 ehamba phambili yokuwasha imigqomo evundlile kufanele uthenge manje. Sethemba ukuthi ulwazi oluku-athikili luzokusiza ukuthi ukhethe umkhiqizo ofanele izidingo nezimo zomndeni wakho.
Xem Thêm Mã lỗi máy giặt Aqua và cách xử lý được chia sẻ | Muasalebang
Phụ kiện Bàn phím Magic Keyboard cho Apple iPad Pro 11 inch – Chính hãng giá rẻ | Muasalebang
Cách bảo quản đậu hũ chiên | Muasalebang